Emezighị Emezi Anọ M Kwesịrị Izere | Martech Zone
N'ehihie a, m nọrọ awa ole na ole na Barnes na Noble. Barnes na Noble dị nso na ụlọ m, mana ekwesịrị m ikweta na oke ala kacha mma nke ọma yana akwụkwọ dị mfe ịchọta. Anọ m na-agagharị n'akụkụ ugwu 'na Barnes na Noble mgbe niile kama iwepụta oge na-agụ akwụkwọ.
Ka o sina dị, eburu m magazin m kacha amasị m, Uru Web Kere (aka .net) na emechaa bulie Darren na Chris'' akwụkwọ, Nzuzo maka ịde blọgụ na ụzọ gị maka ego isii.
Echeghị m na aha akwụkwọ ahụ na-eme ikpe ziri ezi. Agbanyeghi na otutu akwukwo a bu ihe gbasara itinye ego na ihe mere Darren na ya, ndumodu akwukwo a kariri. Aga m akwado ya onye ọ bụla site na usoro nduzi maka ịde blọgụ. Ọ dị iche na ụfọdụ n'ime akwụkwọ ndị ọzọ kachasị amasị m na ịde blọgụ, dịka Shel na Scoble si akwụkwọ, Mkparịta ụka gba ọtọ, na na ọ bụ ihe kenkwucha na ya obibia kama usoro. Nke a bụ akwụkwọ iji bido ịmalite blọgụ nke ọma.
Akwụkwọ ahụ mere ka ọtụtụ n'ime usoro na usoro m kwuru na blog a sikwuo ike, mana m ga-eso gị kọwaa nnukwu ntụpọ dị na blọgụ m:
Nde blọgụ m anaghị agbanwe agbanwe mgbe niile n'ihi usoro ọrụ m. Nke a na-ewute m ike ebe ọ bụ na anaghị ejide ndị na-agụ akwụkwọ obi ike na ọdịnaya dị mma kwa ụbọchị.
Emebere m saịtị m karịa Teknụzụ Azụmaahịa na ọtụtụ n'ime posts bụ m na -ekọ akụkọ gbasara onwe m nke nwere ike ọ nweghị ihe ọ bụla jikọrọ ya na Teknụzụ Azụmaahịa. Ndị na-agụ m abịawo na-atụ anya nke ahụ n'aka m, mana amaara m na ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ ejeela ije n'ihi ya.
My blog nwere ike ịbụ diced n'ime otutu niche isiokwu ndị ọzọ ezubere iche… ikekwe Online Marketing, Social Media, na Web Development. M ka nwere ike ịrụ ọrụ otu ụbọchị iji belata ọdịnaya ahụ, mana nke ahụ bụ ọrụ siri ike (nke siri ike). Ọ bụrụ na m ga-amalite, nke ahụ bụ n'ezie ụzọ m gaara esi.
Aha m agaghị abụ dknewmedia.com. Ọzọkwa, nke a na-emebi blọọgụ n'etiti mụ na isiokwu m. Ọ na - emekwa ka blog ghara ire ere, ebe m achọghị ire aha m. Ana m elepụ anya na ngalaba ụfọdụ, agbanyeghị! Ọ bụrụ na m nwere ike ịchọta ụfọdụ ndị dị mma, m ga-eleba anya na m ga-ewepụ ọdịnaya m ma wepu aha m na blog.
Na-ele anya mmeghachi omume nke Chris na Darren na post a. Ọ bụrụ n'ị naghị ede blọgụ, gbaa mbọ bulie akwụkwọ Darren na Chris ka ịmalite n'ụzọ ziri ezi. Nnukwu ọgụgụ!
Tags: AnalyticsokikeMmetụta iziziintegratedIntegrated mgbasa oziNgwọta Schaefer Marketing
Jul 6, 2008 na 5:41 PM
Daalụ maka ntụnye ahụ. Aga m ele ya anya.
N'oge a, azịza m nye # 3 bụ ịmepụta blọọgụ dị iche iche maka isiokwu dị iche iche. Ọ bụ ezie na ọ na-enye m ohere ilekwasị anya n'ihe m na-ede maka ndị na-ege ntị ọ bụla, ọ na-agwụ ike mgbe ụfọdụ ịnwa iwepụta ọdịnaya ọhụrụ ahụ.
Ọ ga-amasị m ịnụ echiche ndị ọzọ. blọọgụ dị iche iche, ma ọ bụ nwee ike ịhapụ ụfọdụ n'ime ndị na - agụ akwụkwọ gị?
Jul 7, 2008 na 9: 33 AM
Ikewapu ọdịnaya n'ime blọọgụ echere iche nwere ọtụtụ uru, ma na ndị na-agụ ya na-atụ anya ya yana ị na-etinye isi okwu maka igwe nchọta. Enweghị ihe kpatara na mmadụ enweghị ike ịdebanye aha maka blọọgụ gị ọ bụla, echere m na nke ahụ bụ ụzọ kachasị mma isi laa!
Jul 6, 2008 na 10:47 PM
M ga-eche na kewaa ọdịnaya n'ime otu blog ga-abụ ụzọ ị ga-aga kama blọọgụ atọ ma ọ bụ anọ. Echere m na ọ bụrụ na ị nwere oge iji melite blọọgụ ọ ga-adị mfe.
Ezi post Doug.
Jul 8, 2008 na 6: 21 AM
Daalụ maka akwụkwọ banyere 🙂 N'agbanyeghị otu blog si ewere, olu n'azụ ya bụ mgbe a oké egwu mpempe biko biko tufuo "Douglas" ekpomeekpo 😉
Jul 10, 2008 na 8:40 PM
Daalụ Chris! Mba - Doug agaghi efu na blog a n’oge na adighi anya m na ekwe nkwa… belughi na ego bia n’etiti blog na mu 😉
Ihe na-akpali mmasị na nke a, n'ime ụbọchị ịgbanwe aha ngalaba m, esi m na # 2 na Google gaa # 1 maka Marketing Technology Blog yabụ enwere ihe na SEO ihe a.
Na-eme maka ọmụmụ ihe dị mma na ịhọrọ aha ngalaba gị!
Aug 5, 2008 na 9: 33 AM
Gee whiz. Echefu banyere akwụkwọ ya na ị hụrụ ụmụ okorobịa a blog. Daalụ maka isi elu.